» ब्याटल राउण्डका लागि छानिएका प्रतिभाहरु भाग ७ (भिडियो)
ब्याटल राउण्डका लागि छानिएका प्रतिभाहरु भाग ७ (भिडियो)
२८ भाद्र २०७६, शनिबार ०७:३८
चन्द्र घलान, मकवानपुर, २८ भदौ । चर्चित गायन प्रतियोगिता ‘भ्वाईस अफ नेपाल’ को सिजन २ मा अहिले ब्लाईन्ड अडिसन राउण्ड चलिरहेको छ । यस भिडियो सेरिजको छैटौँ भागसम्म ब्याटल राउण्डका लागि छानिएकाहरुमध्ये ३० जना प्रतियोगीहरुका बारेमा चर्चा गरिसकिएको छ । यदि तपाईले उक्त भिडियोहरु हेर्नुभएको छैन भने यस भिडियोको डिस्क्रीप्सनमा लिंक राखिएको छ । भिडियोको यो सातौँ भागमा ब्याटल राउण्डका लागि छानिएका थप ५ जना प्रतियोगीहरुका बारेमा चर्चा गर्दैछौँ । हेरौँ भिडियो–
कुमार गुरुङ, स्याङ्जा, हाल जापान –एसएलसी पछि गीत गाउन थालेका कुमार जापानमा बसोबास गर्छन् र त्यहाँ गीत पनि गाउँछन् । २७ वर्षीय कुमारले ब्लाईन्ड अडिसनमा चौबन्दी चोली र बोलको गीत गाएका थिए । उनको आवाज सुनेर कोच राजु र दिप फर्किएका थिए । उनी कोच राजुको टिममा छन् ।
डम्बर हिङमाङ,सुनसरी – भ्वाईस अफ नेपालको पहिलो सिजनमा तुहिएको सपना साकार पार्न बलियो भएर आएका अर्का प्रतियोगी हुन् डम्बर हिङमाङ । गत वर्ष ब्लाईन्ड अडिसनबाट बाहिरिँदा आमाको पिडा देखेर विह्वल भएका उनले यो वर्ष भने खाली हात फर्कनु परेन । २६ वर्षीय डम्बरको आवाज सुनेर कोच दिप फर्किए । जसका कारण उनी दोस्रो राउण्डमा जान सफल भएका छन् ।
सम्झना पाण्डे, कोलोराडो, अमेरिका – भ्वाईस अफ नेपालमा सहभागी हुन संयुक्त राज्य अमेरिकादेखि नेपाल आएकी सम्झना विभिन्न कार्यक्रममा व्यस्त भईरहने प्रतिभा हुन् । विभिन्न देशका भाषाभाषीहरुबिचको कार्यक्रममा सहभागी भईरहने सम्झनाले गीत गाउन थालेको करिब आधा दशक भयो । स्वास्थ्य समस्याका कारण लामो समय गाउन छोडेकी सम्झना रोगसँग जुध्दै फेरि साँगितिक क्षेत्रमा सक्रिय भएकी हुन् । ३७ वर्षीया सम्झनाले ब्लाईन्ड अडिसनमा ‘तिम्रो मायाले मलाई’ बोलको गीत गाएकी थिईन् । उनको आवाज सुनेर कोच आश्था फर्किएकी थिईन् ।
सुष्मा विश्वकर्मा, बुटवल –सुष्मा नेपाली तारा सिजन ३ मा उत्कृष्ट १० सम्म पुगेकी प्रतियोगी हुन् । ख्रिष्टियन परिवारमा जन्मिएकी सुष्माले चर्चमा भजन गाउँदादेखि नै सँगीतमा रुचि राखेको बताउँछिन् । उनले ब्लाईन्ड अडिसनमा आशा भोष्लेको ‘झझल्को लिएर आएछ सावन’ बोलको गीत गाएकी थिईन् । २६ वर्षीय सुष्माको आवाज सुनेर कोच आश्था बाहेक तिनै जना कोचहरु फर्किएका थिए । उनी कोच प्रमोदको टिममा छिन् ।आदरणीय दर्शकबिन्द, तपाईलाई यी प्रतियोगीहरुमध्ये कसको आवाज सबैभन्दा राम्रो लाग्छ ? तपाईको विचारमा को फाईनलसम्म पुग्न सक्छ ? कृपया कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला । साथै यो भिडियोको अर्को भाग पनि हेर्न नभुल्नुहोला ।
ब्याटल राउण्डमा पुगेका प्रतियोगीहरु भाग6(भिडियो)